Shirkadda Daabacaada Xayaysiiyada ee Sagal Jet ayaa Fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan Awgeed Macaamiisheeda sharafta leh ugu bushaaraynaysa in qiimo dhimis balaadhan ay ugu samaysay adeegyadii kala duwaan ee shirkaddu u haysay bulshadeeda . | Maalmahanews
Shirkadda Daabacaada Xayaysiiyada ee Sagal Jet ayaa Fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan Awgeed Macaamiisheeda sharafta leh ugu bushaaraynaysa in qiimo dhimis balaadhan ay ugu samaysay adeegyadii kala duwaan ee shirkaddu u haysay bulshadeeda .
Maalimahanews:- Shirkadda Daabacaada Xayaysiiyada ee Sagal Jet ayaa Fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan Awgeed Macaamiisheeda sharafta leh ugu bushaaraynaysa in qiimo dhimis balaadhan ay ugu samaysay adeegyadii kala duwaan ee shirkaddu u haysay bulshadeeda .
Maamulaha shirkadda Sagal Jet Madane Cabdi Yuusuf Aar ayaa waxaa uu ugu baaqayaa dhamaanba macaamiishii shirkadda iyo mushtamaca kaleba in aad shirkadda Sagal Jet ay kuu samaysan qiimo dhimis boqolkii labaatan ah “100/20”.
Dhinaca kale shirkadda Sagal Jet ayaa waxaa laguugu samayeeyay dib u habayn balaadhan waxaana halkaasi kuugu diyaara shaqaale loo carbiyay howlaha ay kuu qabanayaan.
Balanteenu waa inagoo ka faa,idaysana qiimo dhimista Sagal jet.